बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Wednesday, 27 May, 2020
‘दसैँ मात्र होइन, सबै चाडपर्वलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ’ access_timeअसोज १९, २०७६
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यसँग दसैँ पर्वको अवसरमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः तपाईंको बुझाइमा दसैँ, चाडपर्व, संस्कृति र परम्परा भनेको के हो ? मानव जातिसँग यसको सम्बन्ध र त्यसको महत्त्व के हो ? दसैँको पौराणिक सन्दर्भ छ । थोरै ऐतिहा...
तीन शक्ति राष्ट्रको दबाबमा नेकपा access_timeअसोज १३, २०७६
काठमाडौँ– तीन शक्ति राष्ट्रको प्रत्यक्ष चासोका कारण सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दबाबमा परेको छ । यस्तो दबाबलाई कम गर्न नेकपाले प्रस्टीकरण दिनुपरेको छ । यसको सिधा असर नेकपाको आन्तरिक जीवन प्रभावित बनेको छ । नेकपा सत्तारुढ दल भएकाले सरकारसँग जोडिएका...
नेताहरूको अति उपेक्षाले विस्फोट हुन थाल्यो द्वन्द्वपीडितहरूको आक्रोश access_timeअसोज १०, २०७६
द्वन्द्वको घाउ उकुच पल्टँदै जाँदा र त्यसलाई समाधान गर्न राज्यसत्ता र राजनीतिक पार्टीहरू बेलैमा गम्भीर नबन्दा त्यो कसरी विस्फोट हुन सक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हिजो बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडाँैमा आयोजना गरेको राजनीतिक नेतृत्व र द्वन्द्वपीडितहरूबीच अन्तरस...
सत्तारुढ नेकपालाई जहाँत्यहीँ ‘हारैहार’– कहाँ चुक्यो नेकपा ? access_timeअसोज ८, २०७६
काठमाडौँ– तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भई बनेको पार्टी हो– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । २०७४ को तीनै तहको चुनावी अङ्कगणित र देशव्यापी कार्यकर्ता र सङ्गठनको संरचना हेर्दा नेकपा देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो । त्...
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध जोडेपछि नेकपालाई के फाइदा होला ? access_timeअसोज ७, २०७६
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध विस्तारका विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर भएको छ । दुई पार्टी एकतापछि नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच औपचारिक रुपमा भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने गरी लिखित सम्झौता भएको पहिलोपटक हो । तत्...
वामदेवको ‘एक्जिट’ पछि कास्की–२ नेकपाका लागि थप पेचिलो access_timeअसोज ५, २०७६
काठमाडौँ । सचिवालय सदस्य एवम् संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले अन्तर्घातको सम्भावना रहेको भन्दै चुनाव लड्न नमानेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का लागि कास्की २ को उपनिर्वाचन थप पेचिलो भएको छ । नेता गौतमले चुनाव अगाडि नै ‘हार’ स्वीकार गरेपछि सरकारम...
'म ठोकुवा गरेर भन्छु, माधव नेपालकै कारण विवाद सिर्जना भयो' access_timeअसोज २, २०७६
एकताको १६ महिना हुँदा पनि नेकपाले पार्टी एकताका सबै काम अझैै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । विवाद र फरक मतकाबीच टुङ्गिएका एकतामा कहीँकतै तनाव र मतभेद छ । यो समस्या नेकपाको प्रदेश २ मा बढी देखिएको छ । त्यहाँ कहिले प्रदेश अध्यक्षको राजीनामा आउँछ । कहिले कार्यक्रम स्थलमै हात ...
कास्कीबाट चुनाव लड्ने/नलड्ने पार्टी निर्णयमा भर पर्छ : नेता गौतम access_timeभदौ ३०, २०७६
काठमाडौं– कास्की-२ बाट सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई चुनाव लड्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेपनि यसबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । उपचारका लागि पहिलो पटक सिंगापुर जानु पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई कास्क...
नेकपाका लागि ‘अग्निपरीक्षा’ बन्दै उपनिर्वाचन access_timeभदौ ३०, २०७६
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी छ– ‘सरकारले धुमधामसँग काम गरेको छ । विकास र समृद्धिको जग बसेको छ, अब नतिजा आउन बाँकी छ ।’ तर दुई तिहाइ शक्तिसहित बनेको सरकारले काम गरेन भन्ने जनगुनासो धेरै छ । यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी द...
नेता कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउने गरी शक्ति प्रदर्शनको तयारीमा नेकपा access_timeभदौ १५, २०७६
काठमाडौँ– सङ्घीय र प्रदेशसभाको चुनाव अगाडि २०७४ असोजमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा ऊर्जा देखिएको थियो । यो ऊर्जाको असर चुनावी नतिजामा देखियो । तत्कालीन बामगठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत मिल्य...
प्रधानमन्त्रीको सक्रियता– वर्षौं हुन नसकेका काम १० दिनमै ! access_timeभदौ ५, २०७६
काठमाडौँ– उपचारका लागि साउन १८ गते सिङ्गापुर गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साउन २७ गते स्वदेश फर्केका थिए । उनी फेरि भदौ ५ गते बिहीबार (आज) ‘फलोअप’का लागि सिङ्गापुर गएका छन् । सिङ्गापुरबाट फर्कंदा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर अनेकौँ आंशका थिए...
ओली–प्रचण्डको खुसीमा माधव नेपालको कुरीकुरी ! access_timeभदौ ४, २०७६
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुर र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबईबाट फर्केपछि नेकपाका आन्तरिक काम नाटकीय रुपमा फटाफट अगाडि बढे । बाँकी रहेका एकतासम्बन्धी काम पनि टुङ्गिए । थाती काम टुङ्गाएकोमा दुवै अध्यक्ष ओली र ...
नेकपामा उथलपुथल : दुई बैठकका रणनीतिक निर्णयहरु जसले गर्दैछ शक्ति सन्तुलनमै फेरबदल ! access_timeभदौ २, २०७६
काठमाडौँ । शुक्रबार र आइतबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका संगठनात्मक एकताका धेरै काम टुङ्गाएको छ । तर, विगतमा भन्दा यसपालीका नेकपाका निर्णयहरु निकै नै रणनीतिक देखिन्छन् । पछिल्ला निर्णयले नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल नै ल्याइदिएको छ । एकतापछि लेनदेनमै वि...
प्रचण्डलाई ओलीको ‘सर्प्राइज प्रस्ताव’ access_timeसाउन ३१, २०७६
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी लिन प्रस्ताव गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मेवारी लिन र पार्टी एकता गर्नुपूर्वको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री छाड्नसमेत तयार ...
माधवलाई हटाएर झलनाथलाई ‘एक नम्बर’ बनाउने प्रस्ताव ! access_timeसाउन ३१, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई वरिष्ठको मर्यादाक्रममा एक नम्बरबाट हटाउने तयारी अध्यक्षद्वयले गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समझदारी अनुसार वरिष्ठको पहिलो नम्बरम...
नेकपाले टुंग्यायो कार्यविभाजन, स्कुल विभागमा पोखरेल, संगठनमा गौतम access_timeसाउन ३१, २०७६
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पाटी) नेकपाले ३३ विभागको जिम्मेवारी टुंग्याएको छ । आज बिहान ११ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विभागको जिम्मेवारी टुंग्याएको हो । लामो समयदेखि विवादमा रहेको स्कूल विभाग प्रमुखमा ईश्वर पोखरेलले जिम्मेवार...
कास्कीबाट चुनाव लड्न वामदेवलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रस्ताव ! access_timeसाउन १८, २०७६
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई कास्कीबाट उपचुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि गौतम आफैले चाहना राखेर विभिन्न जिल्लाबाट उपचुनाव लड्ने इच्छा राखेपनि ओलीले नै प्रस्ताव गरेको यो पहिलो पटक हो । बालु...
के प्रधानमन्त्रीले आलोचकलाई फकाउने रणनीति लिएका हुन् ? access_timeसाउन १७, २०७६
काठमाडौँ । आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आलोचकप्रति उदार नीति अङ्गीकार गर्न थालेका छन् । केही समय अगाडिसम्म पार्टीभित्रकै आलोचकलाई समेत कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र बदलिँदो शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै रणनीति ब...
तिब्बतको चमत्कार ! access_timeसाउन १५, २०७६
ल्हासा, तिब्बत । ८ देखि १५ जुलाई (असार २३ देखि ३०) सम्म चीन र त्यसमा पनि तिब्बत भ्रमण गर्दा तिब्बतको इतिहास, विकास, अर्थतन्त्र, पर्यटन, संस्कृति, कृषि र भूगोलबारे अन्तक्र्रिया गर्ने र बुझ्ने मौका मिल्यो । पढिए, सुनिएको तिब्बत र स्थलगत भ्रमणमा आफैले देखेको तिब्बतबीच धेरै फरक ...
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको ‘राजनीति’ : अड्काउने को ? access_timeसाउन १३, २०७६
काठमाडाँै– सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग पदाधिकारीविहीन भएको चार महिना भयो । चैत्रमा म्याद सकिएपछि नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थिय...
नेकपामा यी नेताले पाउँदैछन् विभागको जिम्मेवारी access_timeसाउन १२, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकीकरणका वाँकी सबै काम टुङ्गाउने तयारी गरेको छ । नेकपामा यसअघिनै भएको सहमति अनुसार तत्कालिन एमालेका (सम्पर्क समन्वय कमिटी सहित) १९ र तत्कालिन माओवादीको कोटामा परेका १४ विभाग प्रमुखको नाममा करिव–करिव सहमति जुटेक...
बदलिँदैछ प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली ! access_timeसाउन १०, २०७६
काठमाडौं । केही महिना अगाडिसम्म नेकपाका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलगायतका नेताहरु पार्टीको औपचारिक बैठकबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि बालुवाटार जाँदैनथे । अनौपचारिक भेटघाटमा तत्कालिन एमाले समूहका केही नेताहरु भन्ने गर्थे, ‘अहिले वालु...